Homen ၏ iSteady Mobile + Gimbal ကိုဆန်းစစ်ကြည့်သည် Gadget သတင်း
Rafa Rodriguez Ballesteros | | ပစ္စည်းများ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, reviews
ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ပြောမယ် အများဆုံးနောက်ကျသော gadget များထဲကတစ်ခု။ အားလုံးအထက် ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစိတ်အားထက်သန်စွာအသုံးပြုသူတို့တွင်။ ဒီကနေ့မှာမင်းတို့ဓာတ်ပုံတွေလုပ်မယ့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Gadget News မှာမင်းတို့ကိုစကားပြောနေတယ်၊ ​​အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာသိသိသာသာမြင့်တက်လာတယ်၊ ငါတို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ် Hohem ၏ iSteady Movile + Gimbal ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် gadget များကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသူတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်မည်သို့ရှိကြောင်းသို့မဟုတ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင့်အားပြောပြရသည့်အခါ ၀ မ်းသာပါသည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြိုက်သလဲ၊ ဘာကိုမကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတာကိုပြောပြပါ။ ဤအခါသမယတွင် Hohem ၏လက်မှ အသုံးပြုရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်ပါပြီ ပြီးတော့ဘာဗီဒီယိုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲ။ အကယ်၍ မင်းကရှာဖွေနေတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါက၊ အမေဇုံတွင် Hohem Gimbal iSteady Mobile + ကိုဝယ်ပါ
1 Gimbal ဆိုတာဘာလဲ
2 box ကို contents တွေကို
3 ဤသည် Gimbal Hohem iSteady Mobile + ဖြစ်သည်
4 ရွေ့လျားနိုင်မှု ၃၂၀ offer အထိပေးသော ၀ င်ရိုးသုံးမျိုး
5 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gadget အတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ application တစ်ခု
6 အဆိုပါ Hohem gimbal ၏ Pros နှင့် Cons
အကယ်၍ သင်ပြောနေတာကိုသင်မသိသေးဘူး။ သော်လည်း အဲဒါကဏ္theမှာအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး သငျသညျသေးဤအရာတစျခုကိုဖြတ်ပြီးလာကြမည်မဟုတ်ပါ။ ကိရိယာတစ်ခု ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည် အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေဆီရောက်လာပြီ။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်အသုံးအဆောင်များနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့်မကိုက်ညီပါ။ တောင်မှ ကျွန်တော်တို့ selfie တုတ်နဲ့တင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရတာမင်းထင်ပုံရလိမ့်မယ်စိတ်မပူပါနဲ့၊ အဲဒါကိုမင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ဒီသုံးသပ်ချက်မှာငါတို့ဘာပြောနေတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးကောင်းကောင်းသိဖို့သင့်ကိုအရင်ပြောမယ် ဒီအိုးကဘာလဲ၊။ တစ် ဦး က gimbal တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာသည် ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းမော်တော်ပလက်ဖောင်း, ဒီကိစ္စမှာ, အာရုံခံကိရိယာများစွာပါတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိတယ် accelerometers နှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်။ သူတို့ရရှိသောအရာ ခေတ်မီ algorithmic programming ကိုဒါဟာဖြစ်ပါသည် အချိန်မရွေးကင်မရာရိုက်ယူသောပုံ၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းပါ.
ဒါက အဆိုပါ gimbal ပေမယ့် ကင်မရာသို့မဟုတ်ဖုန်းကိုကိုင်ထားသည် ရွှေ့ပါ, ရိုက်ချက်များသို့မဟုတ်ဖမ်းယူ တည်ငြိမ်ရှိနေဆဲပါလိမ့်မယ်အချိန်တိုင်း s ။ ငါတို့စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သော Hohem gimbal သုံးပုဆိန်ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ဘုံဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နှစ်ခုသာတွေ့ရှိရသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် -Level မှတ်တမ်းတင်များအတွက်ရှည်လျားသောအသုံးပြုဆက်စပ်ပစ္စည်း။
သင်၏လက်၌တစ် ဦး gimbal အတူ တုန်ခါမှုနှင့်ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုများရှိသောဗီဒီယိုများမရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုများသည် gimbal ကိုင်ဆောင်သူရွေ့လျားနေသည့်တိုင်အလွန်လက်ခံနိုင်သောတည်ငြိမ်မှုကိုပေးသည်။ ငါတို့မြင်တဲ့အတိုင်း စမတ်ဖုန်းလောကမှာပိုပိုပြီးထူထောင်လာတဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခု, ထိုသို့နေဆဲမှလာပုံရသည်။
၏ Gimbal Hohem iSteady Movile + ပါ ကမ်းလှမ်းကြောင်းသုံးရိုးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည် 320ºအလှည့်, accelerometer, သံလိုက်အိမ်မြှောင်။ ဒါဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်တစ် ဦး ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုများတွင်ပုံတည်ငြိမ်မှုကိုလည်းလူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီ gimbal ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအားဖြင့်အဆင့်ရလဒ်များကိုမည်သို့ရရှိနိုင်သည်ကိုလေ့လာရန်မှာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
Hohem Gimbal iSteady Mobile + ကိုယခု Amazon တွင်ရနိုင်သည်
ကျနော်တို့သေတ္တာအတွင်း၌ရှာတွေ့သောအရာကိုကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းအခြားသူများထက် ပို၍ ရိုးရှင်းစွာသော unboxings များရှိသည်။ ကျနော်တို့စမတ်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းအံ့သြစရာကောင်းအောင်မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဒီတော့ box ရဲ့အတွင်းပိုင်း Hohem Gimbal iSteady မိုဘိုင်း +ငါတို့အတိအကျတွေ့ခဲ့တယ်
ထို့အပြင်ခုနှစ်, မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ရှိသည် cable ကိုအားသွင်းနေစဉ် ထည့်သွင်းမှုနှင့်အတူဘက်ထရီ မိုက်ခရို USB။ ကျွန်တော်တစ် ဦး အပိုအဖြစ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအနည်းငယ် Gimbal ကိုယ်တော်တိုင်သည်။ ခြေထောက်လေး ရပ်တည်ချက်၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်တစ် ဦး စူပါလွယ်ကူသောလမ်းအတွက်ဝက်အူခေါက်။ သူတို့နှင့်အတူ ကျနော်တို့က tripod အဖြစ် gimbal ကိုသုံးနိုင်သည်။ gadget ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးတဲ့အသေးစိတ်။
ဤသည် Gimbal Hohem iSteady Mobile + ဖြစ်သည်
ဒီအမျိုးအစား၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ ပြောဆိုခြင်းအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ အထူးသဖြင့်ငါတို့မရောက်မှီကဖြစ်သည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် ၁၀၀% အရေးကြီးသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခု။ ထို့ကြောင့်၊ gadget ကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖော်ပြခြင်းအပြင်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအကြောင်းကိုလည်းပြောပြနိုင်ပါသည်။ Is မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိသောအနက်ရောင်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်နှင့်အတူ သာယာသောထိတွေ့မှု နှင့် တကယ်ကောင်းသောချုပ်ကိုင်။ ထုတ်လုပ်သူအဆိုအရ၎င်း၏ပစ္စည်းများ ရေရှည်အသုံးပြုမှုကိုကောင်းစွာတက်ကိုင်နှင့်ပင် drop လိမ့်မယ် ဖြစ်ခဲ။
အစအ ဦး ၌ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်း၏အသွင်အပြင်သည် selfie တုတ်၏ပုံသဏ္isာန်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ရှိပါတယ် လက်ဖြင့်ကိုင်ထားရန်လက်ကိုင်နှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု နှင့် ergonomic ချုပ်ကိုင် ကြောင်းအခိုငျအမာကိုင်သေချာ။ ကျနော်တို့လက်မနှင့်လက်ညှိုးကိုအသုံးပြု။ ကင်မရာက၎င်း၏ options များနှင့်အတူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ထဲမှာ တိုကျရိုကျဇုန် ကျနော်တို့ရှာတွေ့လက်မသုံးစွဲဖို့ကျန်ရစ် မျိုးစုံရွေးချယ်စရာနှင့်အတူကီးဘုတ်။ ခလုတ်ကိုအပြင် အဖွင့်အပိတ်ဒါမှမဟုတ်၊ ကျွန်တော်တို့အကြားရွေးချယ်နိုင်သော "switch" သေးငယ်သည် ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယို။ ပြီးတော့ငါတို့မှာaရှိတယ် Joystick အရာ gimbal နှင့်ကကင်မရာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ထဲမှာ နောက်ဘက် ၎င်းကိုကျင်းပသည့်ရိယာ၏၊ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သူနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည် ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ပါသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုအသုံးစနစ်ကိုအသုံးပြုပါက၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းစတင်ရန်သို့မဟုတ်ခေတ္တရပ်နား။ စေသည်သောတည်နေရာ နှစ်ခုသာလက်ချောင်းနှင့်s, အညွှန်းကိန်းနှင့်လက်မ, ကျနော်တို့ပြီးပြည့်စုံသောထိန်းချုပ်မှုရှိနိုင်ပါသည် အဆိုပါ gadget ကနှင့်ကင်မရာသူ့ဟာသူ။ Y သင်ထင်ထားတာထက်သင် Amazon ကိုရနိုင်သည်
ရွေ့လျားနိုင်မှု ၃၂၀ offer အထိပေးသော ၀ င်ရိုးသုံးမျိုး
ထိပ်မှာ "လက်ကိုင်" အထက်, Hohem gimbal အဆိုပါပါရှိပါတယ် ရွေ့လျားမှုသုံးပုဆိန်သို့မဟုတ်။ အလွန်ကောင်းတဲ့က de ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် algorithm ကို -based configuration ကို၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးလက်ရာမြောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်နေသည့်ပုံရိပ်ကိုသူတို့အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ချောချောမွေ့မွေ့ကြည့်ရှုသင့်သည်။ အောင်မြင်သောစံကိုက်ညှိခြင်းနှင့်ဂီယာသုံးခြင်းကအသုံးပြုသူကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ပိုမိုမြင့်မားသောရိယာ၌ငါတို့ရှာပါ ကျနော်တို့ဖုန်းသို့မဟုတ်ကင်မရာနေရာမယ်လို့ဘယ်မှာ "ညှပ်" ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယို၏။ တစ်ခုနှင့်ရေတွက်ပါ အတွင်းပိုင်းပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများနှင့်အတူစီတန်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုကာကွယ်ရန်။ ၎င်းကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြင့် device အားဖိအားပေးနိုင်ပြီးအသံသွင်းထားသည့်တည်ငြိမ်မှုရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် "ပူးတွဲပါ" သော gadget အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ကျနော်တို့ပုဆိန်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ် အဘယ်သူမျှမလှည့်ထောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
သုံးဆဝင်ရိုးကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hohem ၏ iSteady Mobile + gimbal သည်320º tilt (သို့) ဆုံလည်အထိလုံးလုံးလျားလျားလျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ gimbal ကိုရွှေ့ခြင်းနှင့်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အသံဖမ်းအများဆုံးစံပြအနေအထားတွင်ဆက်လက်။ အလှည့်သည်လည်း320ºသို့ရောက်ရှိသည်။ ကင်မရာတည်နေရာကိုမလှုပ်ရှားဘဲလက်ဖြင့်ကိုင်ထားသောလက်ကိုင်စက်ဝိုင်းများကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော joystick ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည် 360ºအပြည့်အဝဒယ်အိုးထောင့်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ဤ gadget ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောတိုးတက်မှုများစွာရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်မသိခဲ့ပါက၎င်းကိုရရှိရန်အတွက်သင်ငွေအမြောက်အမြားသုံးစွဲရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤတွင်သင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် Amazon တွင် Hohem Gimbal iSteady Mobile + ကို ၀ ယ်နိုင်သည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gadget အတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ application တစ်ခု
ရေးသားသူ: Hohem Tech မှ
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောစက်အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းထားခြင်းကထပ်ပေါင်းထည့်သည်။ Device တစ်ခုအတွက် third party ဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုသောအခါသုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံသည်ဘယ်တော့မှမပြည့်စုံပါ။ ထို့ကြောင့် App ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရရှိနိုင် options များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိနိုင်ပါသည် Hohem iSteady Mobile + မှာရှိတယ်။
ဒီပြည့်စုံလျှောက်လွှာမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာကိုအမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဘလူးတုသ် activated နှင့်အတူ gimbal ကိုဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် app သည်သူ့ဟာသူဖြစ်သည်။ ဒါပြီးပြီဆိုရင်သင်၏စမတ်ဖုန်းကင်မရာနှင့်အခြားအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်သည် သင်၏ဗီဒီယိုများသည်နောက်တဖန်မတူပါ.
ဓာတ်ပုံသည်သင့်အတွက်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပြီးသင်၏စမတ်ဖုန်းကင်မရာမှပိုမိုထွက်လိုလျှင်၊ မစဉ်းစားပါနှင့်။ ငါတို့သည်သင်တို့သာအကြံပေးနိုင်ပါတယ် တဖြည်းဖြည်းလူကြိုက်များမှုတိုးပွားလာသောဤစပ်စုနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ gadget ကို။ Hohem iSteady Mobile + ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းသည်မှာသေချာသည်မှာသင်၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Hohem gimbal ၏ Pros နှင့် Cons
သင်ပထမဆုံးလည်ပတ်ချိန်တွင်သင်မြင်သောအခါထင်ရသလောက် ပို၍ လွယ်ကူပါသည်။
ထုံးစံတစ်ခု padded ဇစ်သယ်အိတ်ပါရှိပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ခက်ခဲဆက်စပ်ပစ္စည်းပါလိမ့်မယ်။
၎င်း၏အရွယ်အစားကြောင့်သင်နေ့စဉ်နှင့်လမ်းပေါ်တွင်အမြဲတမ်းသယ်ဆောင်ရန်အတွက် gadget တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
Hohem gimbal တည်ငြိမ်သောမိုဘိုင်း +
သုံးသပ်ချက် - Rafa Rodriguez Ballesteros
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » မိုဘိုင်း + Gimbal ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Google Home ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ